अमेरिकामा कोरोना संक्रमण संख्या सबैभन्दा बढीः ट्रम्पले के भने ? - TodayKhabar
राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले सञ्चारकर्मीहरुलाई भने, ‘तपाईंहरुलाई चीनमा कति (बिरामी) छन् भन्ने थाहा छैन ।’ ट्रम्पले भाइरस रोक्न थप कडाइका कदम चाल्ने कुरालाई भने अस्वीकार गरेका छन् । उनले अब छिटै नै अमेरिकीहरु आफ्नो काममा फर्किने दाबी गरे ।
अपराधको अर्काे सनसनीपूर्ण खुलासाः आफ्नै बहिनीसँग आपतिजन अवस्थामा भेटेपछि…….
माधव नेपाल छाडेर एमाले एकता असम्भव